रामलखन जयसवाल मृत्यु प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न माग « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल कलवार कल्याण समिति, काठमाडौंले वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएका रामलखन जयसवालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग राखेको छ ।
समितिले जयसवालको के ? कसरी मृत्यु भएको हो ? त्यसमा संसदीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेपनि माग गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले जयसवालको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले जयसवालको परिवारले उचित न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ । सरकारले यो विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । परिवारले अघि सारेका मागहरु चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
उनले पोष्टमार्टमको रिपोर्ट पनि चाँडै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । न्यायका लागि जयसवाल परिवार धेरै दिनदेखि काठमाडौंमा रहेकोले आफ्नो परम्पराअनुसार अन्त्येष्टी गर्नको लागि शव पनि चाँडै रिलिज गर्न सरकारसँग समितिले आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रममा मृत्तक जयसवालकी भाई बुहारी पुनम जयसवालले यो प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिन माग गरेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीज्यू, चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस, यो जेल र वीर अस्पताल बद्नाम नहोस् ।’
उनले वीर अस्पतालले किन अहिलेसम्म सीसीटीभी फुटेज ननिकालेको भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् । उनले मृत्तक जयसवालको पोष्टमार्टम भइसक्दा पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट नदिइएको गुनासो पोखिन् ।
कार्यक्रममा प्रथम उपाध्यक्ष अवलेश प्रसाद गुप्ता, द्वितिय उपाध्यक्ष चन्द्रेश्वर प्रसाद साह, महासचिव रामबाबु चौधरी, सचिव महेन्द्र चौधरी र सदस्यहरु रञ्जु जयसवाल र दिनेश जयसवालको उपस्थिति थियो ।
समितिले जयसवाल परिवारलाई न्याय दिलाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । उसले काठमाडौं सीडीओ कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।